NYOCHAA OKWU - OKWU - 2019
Ngwaọrụ MS Word Review
Enweghị ike ikwu na mgbe mgbe, mana ka ọ dị ọtụtụ ọnụ ọgụgụ, otu onye ọrụ VKontakte pụrụ ịchọ njikọ kpọmkwem na nkwado ntanetị nke netwọk mmekọrịta a. Dị ka ọtụtụ saịtị ndị ọzọ, VK.com na-enye ndị ọrụ ya ikike ide ozi nlekọta, bụ nke, mgbe atụlechara, ndị ọkachamara nyere aka zara ya.
Ọ dị mkpa ịghọta na ide ozi ụfọdụ na nchịkwa ga-esonyere ya. Ọ bụrụ na ị mebie iwu a dị mfe, ịnwere ike inweta ntaramahụhụ, ọbụna na-egbochi ụfọdụ n'ime ihe ndị nwere ike ime ma ọ bụ na ibe a dum. netwọk.
Ka ọ dị ugbu a, a na-anwale ezigbo ozi ndị ọrụ ederede na nkwado ntanetị. Ọ bụrụ na arịrịọ ịdere nwere ezigbo ihe kpatara ya, ị ga-enweta nzaghachi sitere na nchịkwa ahụ ngwa ngwa.
A na-atụ aro ka ị ghara ide ederede na nkwado ntanetị nke netwọk mmekọrịta na VKontakte n'enweghị ezigbo ihe mere. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu ahụ bụ na a pụrụ idozi nsogbu kachasị mfe na-enweghị ntụgharị usoro. Ọ bụrụ na ị ka kpebiri ime ihe n'ụzọ a, mgbe ahụ ị kwesịrị ịmara - n'ọtụtụ ọnọdụ, nchịkwa ga-enye gị njikọ nke akwụkwọ ndị dị ugbu a na ngwọta maka otu nsogbu ma ọ bụ nke ọzọ ndị ọrụ zutere ma ọ bụ nwee ike izute.
Mmegbu ma ọ bụrụ na ị kpọtụrụ nkwado teknụzụ ga-ekwe omume naanị na mmebi doro anya nke nkwekọrịta onye ọrụ VKontakte. //vk.com/terms
Ndepụta nsogbu maka ịkpọtụrụ nlekọta VK.com dị mkpa nwere ike ịgụnye:
ugboro ugboro iji mbanye anataghị ikike akaụntụ gị;
ohere zuru ezu nke ịnweta site na ibe, gụnyere ekwentị;
mgbanwe data, dị ka aha mbụ na nke ikpeazụ;
mkpa maka nkwenye akaụntụ;
mkpesa nye ndi oru ozo ma obu ndi otu na obodo.
Ihe Ọmụmụ: Iweghachite Paswọdu VKontakte
Enwekwara nsogbu ndị na-enweghị ike idozi ọbụna site nchịkwa, dịka ọmụmaatụ, nloghachi nke otu oge, ma ugbu a oge ochie, imewe. N'okwu a, biko rịba ama na mgbe nsogbu ndị a na-adịghị edozi emetụta na ụdị mmelite dị na saịtị mmadụ. netwọk.
Gaa na saịtị VKontakte ma gbasaa menu isi site na ịpị avatar gị na n'akụkụ aka nri nke ibe.
Site na ndepụta nke ngalaba, họrọ "Enyemaka".
Na igbe nchọta, tinye ajụjụ nke kwekọrọ ajụjụ gị, ma pịa igodo "Tinye".
Ọ bụrụ na saịtị ahụ azaghị ajụjụ gị, ị ga-ahụ ọkwa ngosi ya.
Iji dee nkwado nkwado, pịa njikọ. "Dee anyị akwụkwọ" na njedebe nke ọkwa ahụ edepụtara.
Mgbe ị meghere njikọ ahụ, ị ​​ga-ahụ ọkwa gbasara ọrụ nchịkwa na oge nhazi nke arịrịọ gị. Iji gaa na kọntaktị ahụ na nkwado teknụzụ, pịa "Jụọ ajụjụ".
Na ibe a, ịnwere ike ịkọwapụta ihe kacha mkpa nke ozi gị, yana, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye akwụkwọ na foto ọ bụla.
Aha ahụ kwesịrị ịbụ nkwụsịtụ mkpirikpi nke nsogbu gị.
Ozugbo a kwadoro arịrịọ ahụ, pịa "Zipu"ịmalite usoro nyocha maka ozi gị.
Mgbe ịpị bọtịnụ ahụ a kapịrị ọnụ, a ga-ezipụ ozi ahụ.
A pụrụ ịhụ ọkwa nke ịtụle arịrịọ gị na ibe nke ngalaba ahụ. "Enyemaka".
Ị nwere ike ihichapụ ma ọ bụ dezie ozi gị n'oge ọ bụla adaba site na ịpị otu n'ime njikọ ndị dị mkpa.
N'ihe banyere edezi ọdịnaya nke mkpesa ahụ, oge nhazi oge a ga-emezigharị ozugbo
A na-atụ aro ka ichere ndidi iji nweta nzaghachi site na nlekọta VKontakte ma dozie nsogbu ahụ. Echefula na ị ga - ekwurịta okwu na ezigbo ndị mmadụ, onye ihe ngwọta nke ọtụtụ nsogbu na - adabere na nke a bụ akụkụ dị mkpa nke mkpesa ahụ.
Onye ọkachamara a kwadoro ga-agwa gị gbasara akụkụ niile gbasara nkwado ịchọrọ ịkpọtụrụ gị, nakwa ịza ajụjụ ọ bụla doro anya ị nwere ike ịnwe. Anyị na-achọ ka ị nwee ọganihu iji dozie nsogbu gị!